Fikatsoana tsy nampoizina tamin’ny fifidianana any Samoa sy ilay politisiana hanangana ny mpanjaka na mpanjakavavy · Global Voices teny Malagasy
Mety hanana ny praiminisitrany vehivavy voalohany ny firenena
Voadika ny 19 Avrily 2021 5:19 GMT
Fanisam-bato eto Samoa. Sary avy amin'ny pejy Facebook an'ny Biraon'ny Vaomiera misahana ny fifidianana – Samoa. Counting of votes in Samoa. Photo from the Facebook page of the Office of the Electoral Commission – Samoa
Na teo aza ny faminaniana mahatoky avy amin'ny praiminisitra Samoana, Tuilaepa Dr Sa'ilele Malielegaoi, fa hahazo toerana 42 farafahakeliny ao amin'ny parlemanta ahitana mpikambana 51 ny Antoko Fiarovana ny Zon'olombelona (HRPP), dia nahitana vokatra tsy nampoizina ny fifidianana tamin'ny 9 aprily. Nahazo seza 25 monja ny HRPP – isa mitovy amin'ny azon'ny antokon'ny mpanohitra Fa’atuatua I le Atua Samoa ua Tasi (FAST). Niafara tamin'ny toe-javatra miavaka ity fitoviana ity fa ny latsa-bato azon'ny solombavambahoaka mahaleotena iray – Tuala Iosefo Ponifasio, avy ao amin'ny distrikan'i Gagaemauga Laharana 1 – no mety hanapa-kevitra hoe iza no handrafitra ny governemanta manaraka an'i Samoa.
Fifidianana fahafito tao Samoa ny fifidianana tamin'ny 9 aprily hatramin'ny nanomezana ny fifidianana andraisan'ny rehetra anjara tamin'ny taona 1991. Tsy maintsy mifidy ireo mpifidy 128.000 mahazo mifidy tao amin'ity fanjakana Nosy Pasifika ity, ka 192 ireo kandidà nifaninana tamin'ireo seza 51 ho an'ny taom-piasana dimy taona tao amin'ny antenimieram-pirenena. Nanipika ny endrika milamina tamin'ny fizotry ny fifidianana ny ekipan'ny Firenena Mikambana ao Samoa :
Mitohy amin'ny fomba milamina sy mangina ny fifidianana any #Samoa. Fiomanana mahatalanjona, ohatra tsara amin'ny fizotra demaokratika matanjaka mankany amin'ny fananganana ny Parlemanta vaovao. Fantaro avy ao #Samoa hoe manao ahoana izany fifidianana malalaka sy ara-drariny izany. Mijoro miaraka aminareo sy ny safidinareo izahay @un_samoa
Nanjakan'ny HRPP ny parlemanta tao anatin'izay 39 taona, nahitana an'i Tuilaepa teo amin'ny fitondrana nanomboka ny taona 1999, ary ity fifidianana farany teo ity no fotoana voalohany nahazoan'ny antoko mpanohitra iray seza marobe. Hitan'ireo mpanara-maso sasany ho toy ny famantarana ny tsy fisian'ny fanohanan'ny besinimaro ny praiminisitra sy ny HRPP intsony izany.
Niafara tamin'ny fampiatoana ny fivoriana ny fifidianana ankapobeny tao Samoa, 25 sy 25. Afaka roa herinandro ny vokatra farany, mihamafy ny fifampiraharahana henjana. Faharesena goavana ho an'ny fitondrana HRPP sy ny praiminisitra menavazana 22 taona, Tuilaepa ny vokany, na izany na tsy izany. Vita ny antokony, fanontaniana fotsiny hoe mandra-pahoviana no haharetany izao
Samoa Observer, vondrona gazety lehibe indrindra ao amin'ny firenena, nanadihady ireo tanora mpifidy, ao anatin'izany i Mulimai Laalai, izay niresaka momba ny lanjan'ilay fifidianana:
Hatramin'ny nahatongavan'ny HRPP teo amin'ny fahefana, dia tsy mbola nahita antoko mahafaninana azy ireo aho. Saingy tsy mitovy amin'ny fifidianana teo aloha ny Fifidianana ankapobeny tamin'ny 2021 satria manana antoko roa mifanintsam-bato isika izao ary fivoarana vaovao izany. Hitako fa mahaliana izany ary manan-jo hifidy izay kandidà, ho amin'ny fanovana sy fanatsarana ny firenentsika.
Nanoratra tao amin'ny bilaogy Devpolicy, nilaza i Mata'afa Keni Lesa hoe maninona no tokony adika ho fahavoazana ho an'ny HRPP ny valim-pifidianana:
Mipetraka amin'ny firenena isika izay tsy nahalala governemanta hafa ankoatra ny HRPP ny taranaka maro. Efa ho 40 taona mandraka androany ny fanovana governemanta farany.
Efa nampanantena antoko mpanohitra matanjaka ny valim-pifidianana, singa iray tena ilaina amin'ny demokrasia izay tsy hita nandritra ny folo taona. Efa folo taona lasa izay no nankatoa antoko mpanohitra ofisialy ao amin'ny parlemantera i Samoa.
Efa faharesena mangidy ho an'ny praiminisitra Tuilaepa sy ny antokony ny valim-pifidianana mifanintsam-bato [miara-milahatra] izay nilaza mialoha tamim-pianjonanjonana fa hiverina eo amin'ny fitondrana izy ireo mahazo toerana tsy latsaky ny 42.
Nilaza ny depiote izay hisafidy ny HRPP sy ny FAST fa hanontany ny fari-pifidianana misy azy izy ary hiandry ny valim-pifidianana farany vao handray fanapahan-kevitra. Mety ho mpanangana mpanjaka na mpanjakavavy izy – ny mpitarika ny FAST, Fiame Naomi Mata no mety ho praiminisitra vehivavy voalohany any Samoa raha voafidy.
Nanaiky ny ezaka nataon'ny ekipan'ny FAST tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana i Fiame, no sady niaiky koa fa gaga tamin'ny valim-pifidianana. Hoy izy tamin'ny Radio New Zealand:
Heveriko fa tena nahatalanjona ny zavatra vitantsika. Ary tsy maintsy omeko toky ny ekipa sy ny fanohanana lehibe, tsy ny eto an-toerana ihany fa ny Samoana am-pielezana koa. Fantatrareo fa somary mahatalanjona izany. Te hanana fotoana kely aho hijerena ny fomba nitrangan'izany sy ny antony nitrangan'izany.
Nilaza tamin'ny tvnz ihany koa izy fa, na inona na inona valim-pifidianana farany, mino izy fa zava-dehibe ny manohana ny vehivavy amin'ny politika:
Tena mpiaro mafy ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny politika aho. Tsy mihevitra aho fa amin'ny maha praiminisitra fotsiny izany – heveriko fa [amin'ny] sehatra rehetra nisongadinan'ny vehivavy – ka mieritreritra aho fa nahatsapa tena foana … ho toy ny maodely.
Mandritra izany fotoana izany, namoaka lahatsoratra ny Samoan Observer momba ny fomba tokony hanaovan'i Tuala ny fakan-kevitra amin'ny fari-pifidianany:
Mety nanome lanja sy fahefana tsy mahazatra ity fifidianana ity. Saingy ny [toeram-pahefana] dia mifamatotra loatra amin'ireo fari-pifidianana 50 ao amin'ny firenena amin'ny alàlan'ny tsirinkevitra lalindalina kokoa : ny firenena Samoana. Mametraka ny lanjan'ny fe-potoam-piasan'ny parlemantera dimy taona amin'ny fomba fijeriny izany.
Tsy maintsy manapa-kevitra momba izay antoko heveriny fa afaka hitondra an'i Samoa tsara indrindra ny distrika. Fomba fitsarana izay tsy maintsy raisina amin'ny alalàn'ny fizotran'ny fanapahan-kevitra ao amin'ireo tanàna mandrafitra ny distrika izany fa tsy ivelan'ny tanàna.
Tamin'ny 14 aprily, nanambara ny sampam-pifidianan'i Samoa fa nahita fisoratana anarana indroa tamin'ny vatom-pifidianana izy, saingy tsy miova ny valim-pifidianana ankapobeny. Tamin'ny ora nanoratanay, dia mbola tsy nisy fanambarana momba ny valim-pifidianana farany, saingy antenaina fa hantsoina alohan'ny faran'ny volana ny parlemanta vaovao.